फास्ट ट्र्याकको काम तत्काल अगाडी बढ्छः प्रधानमन्त्री | ChitwanOnline
Home / भर्खरै / फास्ट ट्र्याकको काम तत्काल अगाडी बढ्छः प्रधानमन्त्री	फास्ट ट्र्याकको काम तत्काल अगाडी बढ्छः प्रधानमन्त्री
काठमाण्डौं, ९ फागुन । राजधानी र तराई मधेस जोड्ने दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समितिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो । सो मार्ग निर्माण नेपाल सरकार स्वयम्ले बनाउने घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विगतमा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)केही मूल्यमा लिएर आन्तरिक स्रोत जुटाई छिटो निर्माण कार्य आरम्भ गर्न सुझाव दिइएको छ । विकास समिति वा कम्पनीको ढाँचाको कार्यालय स्थापना गरी तत्काल कार्य आरम्भ गरी आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।
करिब रु सवा खर्ब लाग्ने सो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षका सरकारले रु दश अर्ब विनियोजन गरेको छ । डिपिआर लिन सो कम्पनीले रु ३८ करोड भारु माग गरेकामा त्यसमा संवाद गरेर कम मूल्यमा पनि लिन सकिने संयोजक डा. श्रेष्ठले बताए । उक्त कम्पनीसँगका सम्झौता रद्द भइसकेको छ ।
उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छिटो निर्णयमा पुगिने जनाउँदै उनले दू्रत मार्ग निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग पनि अन्तरसम्बन्ध भएकाले यसलाई महत्व दिइने बताए । काठमाडौँबाट एक सय ५९ किलोमिटर दूरी हुने सो मार्गमा नेपाली सेनाले चार वर्षअघि ट्र्याक खोलिसकेको छ ।
tweet Previous: गयल हुने शिक्षकको तलव काटेर विद्यालयमा चाहिने आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद
Next: कुवेतमा ५ जना नेपालीलाई मृत्युदण्ड